hataru/हटारु: पछिल्लो स्क्यान्डलबारे के भन्छन् भुवन ?
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, जेठ ९- दुईपटक बिहे, दुईपटक नै डिभोर्स। अनि बेलाबेला ‘स्क्यान्डल'मा मुछिइरहने अभिनेता भुवन केसीको जीवन फिल्म जत्तिकै नाटकीय छ। ‘महिला मित्र'सँग छिट्टै घुलमिल हुने उनको चरित्र फिल्मका कुनै रोमान्टिक पात्रको भन्दा कम छैन।
पब्लिसिटी स्टन्टमा उनलाई कसैले जित्दैन। अरू निर्माता फिल्म रिलिज गर्न टेलिभिजनमा सशुल्क ‘प्रोमो' बजाउँछन्। भुवन सित्तैमा ‘रियल ट्रेलर' देखाउँछन्। आफ्नो यो शैलीलाई नयाँ फिल्म ‘साथी म तिम्रो'को रिलिज हुनै लाग्दा पनि उनले निरन्तरता दिएका छन्। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘नयाँ प्रेमिका' लिएर प्रकट भएका भुवनलाई त्यही दिनदेखि ‘स्क्यान्डल'ले लखेटेको छ। र, कोटेश्वरको खुला सडकमा ‘क्लाइमेक्स' भयो।
स्क्यान्डलको पछिल्लो शृंखलाको उद्देश्य के हो?
स्क्यान्डल बनाउने उद्देश्यले प्रेरित घटना थिएन त्यो। एउटा साधारण घटनालाई यति धेरै मिर्च मसला हालेर प्रस्तुत गरियो कि त्यो एकदमै कमर्सियल नेपाली फिल्म जस्तो बन्यो।
त्यसो त अरूकी श्रीमतीलाई ‘प्रेमिका' बनाएको। डेटिङको लागि नगरकोट हिँडेको। बाटोमा झगडा परेको जस्ता दृश्य पनि त फिल्मी मसला जस्तै थियो नि होइन?
तपाईंले पनि गलत आरोप लागाउन खोज्नु भो। उनीसँग म अरू नियतले हिँडेको थिइन। उनकै बुटिकको विज्ञापन बनाउन लोकेसन हेर्न जाँदै थियौं। भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर मलाई ठिक लागेको थियो। सुटिङ स्पट छान्न जाँदै गर्दा कोटेश्वर कटेपछि एउटा मोटरसाइकल बाटोमा तेर्सियो। उनका श्रीमान रहेछन्। ड्राइभिङ सिटमा गएर घर जाउँ भने। उनले काम सकेर आउँछु भनिन्। उनले गाडीको साँचो खोस्न लागे। पछाडि गाडी जाम हुन थाल्यो। वरिपरि मान्छे झुम्मिए। मैले गाडीमै बसेर कुरा गर्न अनुरोध गर्दा तपाईंलाई चासो परेको कुरा होइन भने। चुप लागेर अरूको झगडा हेर्नुभन्दा घर जान्छु भनेर म निस्केको हुँ।
तपाईले सार्वजनिक स्थलमै उनलाई ‘मेरी नयाँ प्रेमिका' भनेर सबैको सामु चिनाउनु भएको होइन?
फिल्म ‘वरदान'को मुहूर्त कार्यक्रममा उनी र म सँगै गएका हौं। हाम्रो चिनजान उनकै जन्मदिनको कार्यक्रममा कमलादीको राजघराना रेस्टुरेन्टमा भएको थियो। १० दिन अघि एउटा फ्यान र कलाकारको रूपमा भएको चिनजान नजिकको साथीमा परिणत भएको थियो। त्यो दिन उनले फोन गर्दा म कार्यक्रममा जान तयार भइसकेको थिएँ। बुटिक सञ्चालकको नाताले उनी कलाकारसँग संगत बढाउन चाहन्थिन्। त्यसैले त्यो कार्यक्रममा जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि लगेको हुँ। केटीसँग देख्ने बित्तिकै केही पत्रकारले ‘नयाँ प्रेमिका हो कि के हो?' भनेर जिस्क्याए। मैले पनि ठट्टामै ‘हो भने हो' भनेको थिएँ। बदनाम गर्न चाहनेले मौका पाइहाले।
अरूकी श्रीमतीलाई ठाडै प्रेमिका भनिदिँदा पर्न सक्ने असर किन सम्झनु भएन?
छिट्टै साथी बन्यौं भन्नुको अर्थ म उनको घर, परिवार, नाता गोता सबैको बारेमा जानकार थिएँ भन्न मिल्दैन। नढाँटी भन्दा मलाई उनी विवाहित हुन् कि होइनन् भन्ने पनि थाहा थिएन। साथी बनाउनु अघि बायोडाटा हेर्ने कुरा भएन। राम्रो मान्छे लागेर संगत गरेको हुँ। उनकै इच्छामा कार्यक्रममा गएका हौं। जिस्केको कुरालाई यति ठुलो मुद्दा बनाएको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ।
तर, तपाईंको ‘ठट्टा'ले उनको पारिवारिक जीवन संकटमा पर्‍यो नि?
त्यो घटना एउटा माध्यम मात्र हो। पाँच वर्षदेखि उनको दाम्पत्य जीवनमा चिसोपन आएको रहेछ। त्यो ‘गसिप' पत्रिकामा छापिएपछि उनका श्रीमानले पुलिस केस गरेर सम्पत्ति चार भाग लगाउनेदेखि डिभोर्सको लागि समेत फोर्स गरेछन्। पछि थाहा भयो उनी तीन महिनादेखि छुट्टै बसेकी रहिछन्। उनका श्रीमानलाई निहुँ चाहिएको रहेछ। त्यो घटनालाई हतियार बनाए।
तपाईंलाई पछुतो लाग्नुपर्ने त हो नि?
गल्ती गरेको भए पछुतो मात्र हैन म माफी नै माग्न तयार हुन्थेँ। उनको श्रीमानलाई सम्बन्धबारे शंका लागेको भए बसेर सल्लाह गर्न सकिन्थ्यो। तर, उनले ‘घर बिगारेर जान मन लागे जाओस्। तर, सम्पत्ति छोडोस्' भनेका छन्। यो घरझगडा सम्पत्तिमा अड्किएको देखेको छु। बेकारमा मलाई बदनाम गर्न खोजियो।
अहिले कस्तो छ तपाईंहरूको सम्बन्ध?
असल साथीको सम्बन्ध कायम छ। आफ्नो कारणले मेरो प्रतिष्ठामा आँच पुग्न खोज्यो भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेकी छिन्।
तपाईंलाई समेत सम्पत्तिको लोभ गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ नि?
मैले अघि नै भनेँ। १० दिनमा बनेको मित्रता हो हाम्रो। मैले उनलाई बैंक ब्यालेन्स, लालपुर्जा हेरेर साथी बनाएँ होला त? उनीजस्ता मेरा लाखौं फ्यान छन्। ती अर्बपति छन् कि ख्याग मलाई के मतलब? म कुनै संघर्ष गर्दै आएको मान्छे पनि होइन। मेरो बाबुबाजेकै सम्पत्ति प्रशस्त छ। गफ दिएको जस्तो होला मेरो घर अगाडि (सिनामंगल)को एअरपोर्टको ‘रन वे'को केही भाग मेरै बाबु बाजेको सम्पत्ति हो। म आफैं पनि पाँचवटा सुपरहिट फिल्मको निर्माता हुँ। कसैको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनु पर्ने स्थिति छैन।
तपाईंकी पूर्व पत्नी सुस्मिता पनि तपाईंले पैसा हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै हिँडेकी छिन् नि?
१९ वर्षको दाम्पत्य जीवनमा सुस्मिताले मेरो हरेक क्षणमा साथ दिएकी छिन्। अहिले डिभोर्स भयो भन्दैमा उनको बारेका नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर, उनले मलाई आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने एकदमै झुट हो। उनको एक रुपैयाँ पनि चलाएको छैन।
पानी बिनाको माछा र स्क्यान्डल बिनाको भुवन केसी उस्तै हो त?
यो नाम कमाउन पनि साह्रै ठूलो समस्या रहेछ। प्रशंसक सँगै ईर्ष्या गर्नेहरू पनि हुँदा रहेछन्। जसले सधैं विवादमा तान्न खोज्छन्।
तपाईं जस्तो नाम कमाउने कलाकार त अरू पनि छन् नि। तर, विवादमा किन पर्दैनन् त?
धेरै यस्ता छन् जो १० मिनेट सोचेर बोल्छन्। के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने बारेमा सल्लाह गर्छन्। सार्वजनिक ठाउँमा अनुहार देखाउन पनि हुँदैन जस्तो गर्छन्। मेरो जहाँ जोसँग पनि रमाइलो गर्ने बानी छ। प्रश्नको झट्टै उत्तर दिइहाल्छु। कहिलेकाहीं जिब्रो चिप्लिँदा कहाँ फसाउँ भनेर हिँडेकाले मौका पाउँछन्।
यस्ता विवादमा परिरहँदा ‘फ्यान' भड्किएलान् नि?
विवादमा तान्न खोज्नेले जे भने पनि मैले गल्ती गरेको छैन। वास्तविकता मेरा दर्शकले बु‰छन्। माइकल ज्याक्सन र सलमान खान जति विवादमा मुछिए पनि उनीहरूका दर्शक घटेन। त्यसैले डर छैन।
फिल्म चलाउने बेलामै स्क्यान्डलको भुमरीमा किन पर्नुहुन्छ?
म के जानुँ। सायद मेरो फिल्म फ्लप भएको हेर्न चाहनेले यसो गर्छन्। तर, मलाई फाइदै पुग्छ। म ढुक्क छु अरू फिल्म जस्तै ‘साथी म तिम्रो'ले पनि कीर्तिमान राख्छ।
फेरि बिहेको तयारीमा हुनुहुन्छ कि?
सुस्मितासँगै त ५०० प्रतिशत हुँदैन। अरू के के हुन्छ अहिले सोचेको छैन। छोरा अनमोल पनि कलाकारितामा लागेको छ। अहिले मेरो चिन्ता भनेको उसको करियर हो।
Posted by Nabin Bibhas at 11:14 PM